Plasma Mobile adịworị eziokwu | Site na Linux
Ekwesịrị m ịsị, enwere m obi ụtọ. Fewbọchị ole na ole gara aga, na-ele ọganihu nke Mobile Plasma Site na oru ngo Plasma, ekwuru m na netwọkụ mmekọrịta m na Ubuntu ga-esi na ya, mana echeghị m na Plasma Ekwentị adịla adị na obere oge.
1 Gịnị bụ ekwentị Plasma?
2 Etu esi etinye ngwa Plasma ekwentị
3 Ihe m na-eme na ekwentị Plasma
Gịnị bụ ekwentị Plasma?
Azịza ya: KDE na ekwentị gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Plasma Workspace, KWIN / Wayland na Telepathy teknụzụ iji jikwaa oku ekwentị.
Etu esi etinye ngwa Plasma ekwentị
Ihe niile a na-eme na Kubuntu, ebe dịka ihe ha gwara anyị na webụsaịtị ha, anyị nwere ike ịwụnye ngwa n'agbanyeghị agbanyeghị GTK ma ọ bụ QT, yana dị mfe:
Ngwa anyị nwere ike iwunye bụ:
Ubuntu Touch (. Pịa)
Gnome ngwa (ex: GnomeChess)
na ikekwe ndị ọzọ dabere na Qt dị ka Sailfish OS ma ọ bụ Nemo.
N'ụzọ doro anya, a ka nwere ọtụtụ mmepe n'ihu Plasma ekwentị na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche na nke a ma e jiri ya tụnyere sistemụ arụmọrụ nke dị ugbu a n'ahịa, mana enwere ike ịnwale ya, ee, maka ugbu a naanị na LG Nexus 5.
Ebe m nwere otu, ọ ga-ekwe omume na m kpebiri ịnwale ya obere oge, mgbe m nwere gbakwunyere ihe ndị ọzọAgbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị nwere obi ike nwere Nexus 5 chọrọ ịnwale ya, ị ga-aga n’ihu ntuziaka ndị a.
Ihe m na-eme na ekwentị Plasma
Nke a na-adọrọ mmasị. Mgbe anyị chere na Android, iOS, Windows Phone, na OS ndị ọzọ nwere nghọta dịka Sailfish, FirefoxOS ma ọ bụ Ubuntu ekwentị bụ ndị ọzọ niile anyị nwere, obere mkpuru a na-egosi. Maka iOS na gam akporo o doro anya na enweghị nchegbu, mana FirefoxOS na Ubuntu ekwentị na-enwe oge siri ike.
FirefoxOS anaghị apụ apụ. Ọ bụ ezigbo echiche nwere mwepụta nke mediocre, ọkachasị n'ihi enweghị Ngwa yana mwekota na netwọkụ mmekọrịta. Sistemụ arụmọrụ nke na-agba mbọ ịlanarị, mana ọ dị nwute nwere obere elebara anya, opekata mpe na mgbasa ozi. Na Plasma Mobile forum otu onye ọrụ jụrụ, sị:
Ugbu a, m na-eji Firefox OS n'ihi na ọ bụ os OS kachasị mma m nweterela na ndụ m. Kedu ihe Plasma Mobile na-enye m na Firefox OS anaghị?
Ugbu a, m na-eji Firefox OS dị ka ọ bụ sistemụ arụmọrụ kacha mma m nwetụrụla na ndụ m. Kedu ihe Plasma Mobile na-enye m na Firefox OS anaghị?
Azịza ya kwuru hoo haa:
Ngwa Qt / C ++ na QML.
Qt / C ++ na ngwa ala na QML.
M ga-ekwukwa, ọ bụ ezigbo azịza. HTML5 kwere nkwa, ọ nwere ike ịbụ ọdịnihu, mana oge m jiri Firefox OS gosiri m na ọ naghị ọsọ ọsọ dịka o kwere nkwa.
Ubuntu ekwenti gini ka igha? Agbalịrị m ya, ahụla m na ọ na-arụ ọrụ ma ọ na-ata ahụhụ otu ihe ahụ dị ka FirefoxOS ... mediocre ngwa na ojiji nke na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ. N'agbanyeghị nke ahụ, echere m na ọdịnihu dị ma ọ bụrụ na ndị Canonical na-eme ihe nke ọma.
Ugbu a, Plasma ekwentị nwere nkwanye na-adọrọ mmasị, na-enweghị ike ịmaliteghachi ihe ọ bụla, na-eji teknụzụ egosipụtara ma na-arụ ọrụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịwụnye ụdị ngwa ọ bụla n'agbanyeghị n'agbanyeghị ma ọ bụ Qt ma ọ bụ GTK, na ịhụ ozi ọhụụ nke ọrụ ahụ nke KDE na-emepe iji na-agba ọsọ ngwa gam akporo, enwere m ike ịhụ uche nke ihe niile.
Agụbeghị ihe ọ bụla banyere mwekota nke Ubuntu ekwentị na-ezube na nke a pụtaworị na OSX na iOS, mana site na iji otu teknụzụ Plasma echeghị m na ọ dị obere ịhụ ọganihu na nke ahụ n'oge na-adịghị anya.
Enwere ọtụtụ ihe n'ihu, ekwentị Plasma ezughị oke, ọ chọdịrị mmetụ ọhụhụ ya, mana ana m ahapụrụ gị vidiyo ka ị nwee ike ịmata etu ihe si aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Plasma Mobile adịla adị n'ezie
Enwere m mmasị na ọrụ a na Sailfish mana nke ikpeazụ ahụbeghị m ụzọ iji zipụ ha na Latin America iji nwalee ya.
Enweghị ụlọ ọrụ ndị Latin America nwere mmasị itinye ego na ọrụ ndị a… nwekwara ahịa Latin na-etinye aka na ndị mmadụ na-ahọrọkarị Windows, iOS na Android em
ihe ị na-ekwu chetaara m mgbe FirefoxOS rutere n'obodo m, ha kpọsara ya dị ka ama maka ụmụaka (smartphone mbụ m).
Olee otú ozi ọma a. M hụrụ n'anya plasma na Kde. Olileanya na ọ na-eto ngwa ngwa, nke ọzọ ga-abụ ndakọrịta na arụmọrụ n'ihi iche iche nke ọnụ
ọ dị ka oyi akwa nhazi maka ekwentị ubuntu. Enwere ike ịwụnye ya n'ọdịnihu na ntinye aka nke ubuntu ka arụnyere plasma na ubuntu? ọ ga-amagbu onwe ya.
Zaghachi ka snayder
Ozi magburu onwe ya, ka ndị ọzọ nọ, ọ ka mma. Enweghị m ndidi maka ụfọdụ n'ime ihe a iji ruo Latin America. Banyere.
Ndị a nwere ike ịsọ mpi na Android, BB na Windows ekwentị na-enweghị nsogbu, naanị ha kwesiri ịkwaga ibe ha nke ọma, anyị ga-ahụ ihe ihe a niile ga - eme n'ọdịnihu 😀
Ekwentị Ubuntu bụ otu ọnụ ala nke iphone, na vidiyo KDE m hụrụ akara ngosi yiri ya ...
G WHNY B HAVE ND D NA-EME MMAD D NA-EME?
Ekwentị Ubuntu adịghị ka iphone, ma ọ bụ ya nwere bọtịnụ ma dị ọnụ ala abụghị ịme echiche dị ka nke ahụ
Na akara ngosi nke ndị kde na-emebu, otu ma ọ bụ abụọ si ebe ahụ dị ka ihe ndị iOS, nke depụtaghachi usoro nọmba ahụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ụdị mkpụrụedemede alpha, ha egosilarịrị akara ngosi ọhụụ ha na-eme maka kde, na n'ezie ị ga-enwe ike ịgbanwe ha ma ọ bụrụ na ị masịghị ha.
Na mgbakwunye, ọ naghị ewute m na ha depụtaghachi ihe ụfọdụ site na nhazi nke ihu ndị ọzọ, n'ezie ihu nke ios na android dị mma ma dịkwa mfe nghọta, ọ dịghị mkpa ka ha chepụta echiche ọhụrụ ọhụụ na interface dị ka ubuntu mere. N’ịtụle na kde na-akwado ihu ọma desktọọpụ oge niile, ọ bụghị ihe ọjọọ na ha na-eme otu ihe ahụ na ụdị mkpanaka ha, nke, site n’ụzọ, na-enweta nke ọma ma na-echetara kde desktọọpụ kde, ọbụnadị nwere otu isiokwu ahụ, ọ dị ka ọ ga-enwe ezigbo mwekota.
Enwere m olileanya na ha ga-aga nke ọma n'ihi na ọ dị oke mma. Echere m na ọ na-arụ ọrụ na ubuntu ekwentị nri?
Ọmarịcha. Otu ajụjụ, gịnị mere plasma na-arụ ọrụ? Echere m na oru ngo ahụ gbara nkịtị ma ọ bụ na ọ nwụọla? Agbanyeghi na m bu proKDE aghaghi m ikwu na ekwentị m ozo ga abia jolla, azu mmiri di egwu. M na-echekwa mbadamba Jolla nke m zụtara n'oge ị na-atụgharị uche.
Maka ụmụazụ KDE anyị nwere obi ụtọ, mana ana m ahụ ebe dị anya inwe otu n'ime ndị ahụ nọ m n'aka
ma na-echeta na ị nwere ike iwekota ihe android smartphone na KDE, na-ahụ ozi, gafere ihe na clipboard, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, m nwere ike iche n'echiche otú o kwesịrị ịdị na OS ọhụrụ a, enwere m ike ịkụ nzọ na ọ ga-aka mma karịa ihe iOS nwere na OSX
Ahuru m ya n'anya, enwere m olile anya na ha nwere ihe ịga nke ọma ma bido wuo ihe dika ihe anyi nwere na Linux, mana ka ogwe aka.
Site n'ụzọ, achọtara m firefox ezighi ezi, eziokwu bụ na OS anaghị adị m mma, dabere na ngwa weebụ.
Iji gwa eziokwu, ọrụ a na-ele anya karịa Firefox OS (ọ ka malitere ịmalite na Panasonic SmartViera TVs) na Ubuntu ekwentị (ruo ugbu a, anaghị m ahụ ya na Latin America).
Banyere interface na ndị ọzọ toolkits, nke a bụ n'ezie kwesịrị ya.
Ezi oru ngo 🙂 Dika isi okwu, o sitere na Ubuntu Ekwentị. Nke m na-ahụ nke ọma, ịbụ KDE na Ubuntu Ekwentị dabere na QML nwere ike weghachite uru na ha abụọ.
Obi dị m ezigbo ụtọ. Anaghị m eji KDE mana ọ masịrị m ịgbaso nzọụkwụ ya wee nwalee atụmatụ ọhụrụ ya. Enwere m mmasị na ya, mana m na-agbaso usoro nkwekọrịta m na njiko. N'ihe banyere ndakọrịta na ngwa gam akporo, ọ pụtaghị na ọ dị ka ịnwe gam akporo na KDE. Ugbu a, m na-eji BlackBerry Passport nke na-agba ọsọ na-enweghị nsogbu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa gam akporo niile, mana ekwesịrị ịdeba ama na na-enweghị ọrụ google ọtụtụ n'ime ndị na-arụ ọrụ anaghị aba oke, enwere m obi abụọ na google ga-agbanwe ọrụ ya maka OS ndị ọzọ. Dị ka ngwa ala, ọ nweghị ihe ọ bụla ma n'ezie KDE agaghị achọ enyemaka dị ukwuu site na ngwa ...
Zaghachi Endika Moreno
O putara na ugbu a, enwere m ike itinye supertux na ekwentị m? XD
Ọ bụghị n'ezie, dị ezigbo mma, ọrụ ahụ na-afụ ụfụ na enweghị m mkparịta ụka mana n'echiche m ọ bụ usoro ka mma karịa ios na gam akporo, m na-ekwu ya, ha dị mfe ma nwee nghọta karịa ihe enwere ike ịhụ na vidiyo ahụ.
N'ezie SuperTux ga-abịa gam akporo site na F-Droid, n'ihi na enwere m obi abụọ na ọ ga-eru Google Play.
Chaị! N'ezie, oru ngo a kariri m (dika Eliot si kwuo ya). Enwere m olileanya na site ebe a ha na-agwa anyị mgbe enwere nnweta / mkpọtụ.
Ekele ibe m Elav, na-ekele gị maka izi ozi ọma a! (Amaghịdị m)
Zaghachi to rainerhg7
Ezi post @elav!
Achọrọ m inye aka na ihe nwere ike ịme ka ọnụ ọgụgụ karịa nhazi.
Ọ bụ ezie na ụzọ kachasị mfe na kachasị ọsọ iji gbakọọ oke oriri bụ nke pụtara, ikekwe anyị nwere ike ịdịkwu ike ma jiri "etiti" karịa "pụtara". Kedu ihe ọ ga-azọpụta anyị na ya? Na ọnụọgụ ahụ na-apụ ma ọ bụrụ na njikọ ejirila ọtụtụ ebe nchekwa. Iji maa atụ, were ya na ndị ahịa ndị a na-eri ụkpụrụ ndị a, na ebe nchekwa ha chọrọ (KB, MB, MiB, wdg):
Onu ogugu ga-enye ihe ruru ~ 30
Ma nke a n'ihi na anyị nwere nnukwu njedebe (150), na mgbawa bụ ara. Midian mejupụtara ịnye data ndị a, na-ekewa ọnụ ọgụgụ nke ihe atụ site na 2 (etiti anyị) wee nweta ọnụọgụ nke ọnọdụ ahụ. Site na nke a anyị ga-enwe ihe dịka
Yabụ n'uche anyị ga-abụ: 8/2 = 4 nke bụ ~ 10
N'ebe a, ị ga - ahụ na n'agbanyeghị agbanyeghị nzuzu gabigara ókè, ọ ga - enye anyị uru bara uru karịa. Ọ bụrụ na anyị tinye a ahịa onye na-erepịakwa 200, anyị etiti ga-abụ 11, mgbe nkezi nwere ike ịga …….
Ọ bụ naanị onyinye, ọ dịkwa arụmụka, n'ihi na yana njikọ ya, anaghị agbacha ya.
Mmakọ ndị mmadụ Linux
Nwoke, iji zere oke ụkpụrụ enwere ihe ndị dị ka ọdịdị geometric, ọ bụ ezie na enwere ike iji ya mee ihe dị arọ nke mere na ọnụ ọgụgụ dị nso na ọnụ ọgụgụ ndị otu nwere ikike ụfọdụ, wdg.
Ọ ga-adị mkpa ịhụ ma ọ bụrụ na ọ bụ nkesa kwụsiri ike, mana eziokwu bụ na KDE na-arụ ọrụ dị egwu n'akụkụ niile ... Na ọkwa ọrụ ọ dị ka ọ zuru oke; nsogbu ga-abụ otu ihe ahụ mgbe niile: Ngwa ahụ. Sistemụ arụmọrụ ọ bụla nke na-enweghị Whatsap (ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ bụghị ya bụ eziokwu) agaghị enweta otu uto ahụ dịka ndị ọzọ na-asọmpi ya. Agbanyeghị, n'oge ahụ m na-ahụ ya nke zuru oke ma nwee atụmatụ dị nnọọ ka Plasma5, yana ihe nwere ike bụrụ sistemụ nwere ọtụtụ ihe ikwu banyere ya.
Ọ bụrụ na enwere ike ibudata ngwa ụgbọ mmiri, nsogbu agaghị adị na WhatsApp, anyị nwere ngwa WhatsApp abụọ na jolla ugbu a, otu opekata mpe na-arụ ọrụ zuru oke.
Olee otú m nwere installer na awụnyere na ekwentị m.
Zaghachi Salvador Flores
Ọ bụrụ na ejiri kde mobile na kubuntu banye na mkpanaka ahụ ozugbo, yana iji ụgbọ mmiri jikọọ hd na ya, nyochaa igwe nrụpụta keyboard ma nwee mkpanaka na kọmputa n'otu ngwaọrụ ahụ
Ọ ga - abụ itinye Linux distro 100% jikọtara na mobile wee nwee ike iji mobile dị ka kọmputa BASE, ma ọ bụ mbadamba na igwe
nke a bu odinihu ebe Linux distros gha agha ... na samsung egosiputala uzo ya, windo nwere contniums ubuntu meruru ubuntu nke oma fororid
mana echere m na nke a ga-abụ ezigbo ọdịnihu
Taa ọ bụla mobile dị elu nwere ike ịkwaga distros 100% dị ka a ga - asị na ọ bụ kọmputa nkịtị .. na - eji ọdụ ụgbọ mmiri tinye akụkụ ma nwee ike iji ha dị ka kọmputa BASE, nyochaa, hd, keyboard ma ọ bụ igwe nrụaka ethent printer
a lsaudo ọchịchọ ịhụ nke ikpeazụ version na na ọ ga-arụnyere na ndị kasị ibu ọnụ ọgụgụ nke mobiles ma ọ bụrụ na o kwere omume niile ... na-eme a chịkọtara
Etu esi tinye mgbakwunye PPA na Debian